Lufthansa waxay geynaysaa laba Airbus A321s oo si joogto ah loogu beddelay xamuul
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jarmalka Jebinta Wararka » Lufthansa waxay geynaysaa laba Airbus A321s oo si joogto ah loogu beddelay xamuul
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Jarmalka Jebinta Wararka • News • Waajib ah • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Diyaaradahan waxaa ka shaqeyn doonta shirkadda Lufthansa CityLine iyadoo wakiil ka ah shirkadda Lufthansa Cargo waxaana la dejin doonaa magaalada Frankfurt.
Diyaarado dhexdhexaad ah ayaa loo adeegsadaa inay yihiin diyaarado xamuul oo keliya marka loo maro waddooyinka qaaradaha ee Yurub.
Diyaaraduhu waxay helayaan albaabbo xamuul si ay awood ugu yeeshaan konteynarrada in lagu qaado dusha sare sidoo kale.
Diyaaradda Freighter waxaa maamuli doonta shirkadda diyaaradaha ee Lufthansa CityLine.
Lufthansa Cargo ayaa maalgelinaysa ballaarinta awoodaheeda xamuulka. Bilowga 2022, shirkaddu waxay macaamiisheeda u soo bandhigi doontaa awood dheeri ah oo Yurub ah iyadoo si joogto ah loogu beddelayo Airbus 321 diyaarad rakaab oo xamuul ah. Ujeedadaas awgeed, matoorka-matoor-wadaha matoorka-dhexe wuxuu heli doonaa albaabo waaweyn oo xamuul ah si uu awood ugu yeesho qaadista konteenarrada dusha sare sidoo kale. Markii hore, beddelaad laba diyaaradood oo ah nooca loo yaqaan 'Airbus' ayaa la qorsheeyay. Diyaaradahan waxaa ka shaqeyn doonta shirkadda Lufthansa CityLine iyadoo wakiil ka ah shirkadda Lufthansa Cargo. Waxaa la dejin doonaa magaalada Frankfurt.
Kordhinta shixnadaha xuduudaha ee eCommerce ayaa la saadaalinayaa qiyaastii 20% sanadkiiba shanta sano ee soo socota. Macaamiisha waxay filayaan waqtiyo gaarsiin ah oo abid kayar alaabooyinka ay amreen. Tani waxay sidoo kale kordhineysaa baahida loo qabo isku xirnaanta xamuulka hawada gudaha Yurub.
“Lufthansa Cargo waxay rabtaa inay u fidiso macaamiisha qaybta eCommerce ee isku xidha Yurub iyo Yurub intaba. Iyada oo la beddelay A321s, waxaan la kulmeynaa macaamiisheenna dalabka sii kordhaya ee xalalka isla maalinta ah iyo sii xoojinta shabakadeena cufan ee isku xirnaanta adduunka iyo sidoo kale wax soo saarkayaga, ”ayay tiri Dorothea von Boxberg, oo ah madaxa shirkadda Lufthansa Cargo. Nooca diyaaradda ee la xushay wuxuu qaadi karaa 28t duulimaadkiiba, xamuul aad u weyn oo ka weyn kuwa caloosha gaagaaban ee diyaaradaha rakaabka. Marka lagu daro gudbiyeyaasha, isku-duwayaasha iyo kuwa ka shaqeeya boostada, bixiyeyaasha eCommerce waxay macaamiil u noqon doonaan bixintaan, ”ayuu raaciyay von Boxberg.
“In ka badan 60 sano oo khibrad ah oo ku saabsan gaadiidka hawada Yurub, Lufthansa CityLine waxay u taagan tahay hawlgallo la isku halleyn karo oo hufan iyada oo ah lamaane muhiim u ah Kooxda Lufthansa. Dabacsanaanta hawlgallada iyo xawaaraha aqoonsiga iyo hirgelinta fursadaha cusub ayaa aasaas u ah ganacsigeenna. Waxaan dooneynaa inaan u adeegsano sifooyinkaan si aan ugu adeegno Lufthansa Cargo iyo macaamiisheeda, ”ayuu yiri Steffen Harbarth, oo ah Agaasimaha Maamulka ee Lufthansa CityLine.
Diyaaradda Airbus A321s (A321P2F) oo loo beddelay xamuulleyda ayaa bixisa xamuul dhan 28 tan oo baaxaddiisu dhan tahay 3,500 kilomitir. Beddelaaddu waxay u oggolaaneysaa adeegsiga santuuqyada rarka caadiga ah dusha sare sidoo kale. Mashiinka mataanaha ah ee Airbus A321 waa mid ka mid ah diyaaradaha ugu waxqabadka badan ee fasalkiisa wuxuuna awood u siiyaa hawlgallada qaaradda ee aadka u hufan